Free ngwọta na-na nkwado ma weghachite windows ekwentị
Free Solutions ka na nkwado ma weghachite Windows Phone
Ọ bụrụ na ị na ụdị onye fancies-mwute data na ekwentị gị ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla i nwere ndị dị mkpa na kọntaktị na faịlụ echekwara na ekwentị gị, mgbe ahụ ị ga concur na-eke a azụ maka ndị dị otú ahụ data bụ nnọọ oké mkpa. N'ihi na windo ekwentị ọrụ e nwere ụfọdụ nnọọ mma free ụzọ ndabere data pụtara na ị nwere ike ịzọpụta onwe gị isi na-awa nke adịkwa mkpa data mgbe idebe-akwụ ụgwọ nnọọ ala. Anyị na-a anya na abụọ nnọọ oru oma ụzọ nke na-gị data n'ebe dị nchebe maka ọdịnihu mgbake.
1. Ndi ana-akpo + Ozi ndabere ka SD Kaadị.
2. Back elu ekwentị na ígwé ojii.
3. Back Up Media Files na Wondershare Mobiletrans.
1.Contacts + Ozi ndabere ka SD kaadị.
Na mbụ, Microsoft Windows ekwentị ọrụ nwere ike ndabere ha data iji nyefee m Data ngwa ma na e nwere ọhụrụ nhọrọ na etowo na amara. The kọntaktị + ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwa bụ ọhụrụ ngwọta na-ahapụ ọrụ kwado na weghachite dị mkpa data. Ya mere, olee otú i iji nke a ngwa?
Otú ndabere Ndi ana-akpo na Ozi Iji kọntaktị + ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwa
Ị ga-mkpa iji dị ọcha SD kaadị iji hụ na azụ elu usoro adịghị ada. Ọcha n'echiche nke na ọ ga-free nke malware ka i ghara-ahụ onwe gị adịkwa data si SD kaadị.
Ị ga-enwe iji wụnye kọntaktị + ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwa si ​​Microsoft ụlọ ahịa na wụnye ya na ekwentị gị tupu nke a nwere ike na-arụ ọrụ. NB Mgbe echichi, ị ga-mkpa ịchọta interface na ntọala ngalaba-ọzọ égwu na-na-hụrụ na ngwa ngalaba.
Ozugbo ị bụ na ntọala, ị kwesịrị ị na nanị pịgharịa na ngwa aha mgbe ahụ na-ekweta na ikikere chọrọ n'ihu na ngwá ọrụ.
Pịa na ndabere nhọrọ gaba ihe ị ga-achọ na-echekwa na SD kaadị. The atọ nhọrọ nyere site na nke a na-eji ngwa bụ SMS, MMS na Ndi ana-akpo. Mgbe na-ahọpụta ihe ị ga-achọ iji chekwaa, pịa ndabere
The usoro ga-amalite na ihe niile ị chọrọ ime bụ na-eche maka a nkeji ole na ole ka ọ kwụsị. Mgbe usoro zuru ezu, ị ga-ahụ a na nchekwa aha ndabere + weghachi nchekwa na SD kaadị. SMS ga echekwara ka XML faịlụ mgbe kọntaktị ga-echekwara a VCF usoro.
Olee otú iji weghachi kwadoo Data site na SD kaadị iji kọntaktsị + ozi nkwado ndabere na mpaghara App
Ekwentị ebe ị chọrọ iji weghachi data kwesịrị inwe ndị na kọntaktị + ozi nkwado ndabere na mpaghara ngwa-o kwesịrị nnọọ ihe na-a windows ekwentị nke na-akwado na ngwa. Ọ bụrụ na adịghị nwere ngwá ọrụ mgbe ahụ i kwesịrị ibudata ya na ụlọ ahịa.
Fanye SD kaadị na e dere ihe ndabere + weghachi nchekwa ma ọ bụ ị pụrụ iṅomi ndị na nchekwa ekwentị ahụ na-aga na ntọala na-ahụ ngwa aha wee pịa na weghachi. Pịa na ihe ị chọrọ iji weghachi mgbe ahụ họrọ ebe azụ na-echekwara na pịa weghachi mgbe ahụ na-eche maka usoro.
2.Backup ekwentị na Ígwé ojii
Ichekwa ndabere ekwentị data ka ígwé ojii bụ omume ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ windows 8 OS na ekwentị gị. Ị ga-eji Microsoft ígwé ojii na-echekwa data-ọrụ nwere ike nyeere site na ịbanye na Microsoft Akaụntụ na ekwentị gị. A ga-enyere akpaka azụ elu nke ọdịnaya dị ka photos, Kpọtụrụ History, Ndepụta nke égwu arụnyere, Text Ozi, Theme configurations, App ntọala na ntụgharị ọkacha mmasị. Na-adị mfe ịgbanwe otú ndị a niile na-emejuputa atumatu na site na ịpị Ntọala ahụ soro site System na-ahọpụta ndabere.
Agbanye App na Mwube Back elu
Na ndabere họrọ égwu + ntọala atụgharị na bọtịnụ na-esote Ntọala ndabere. Mgbe ahụ, on na bọtịnụ na-esote App ndabere
Agbanye Ozi ndabere
Na ndabere, pịa Text ozi na-atụgharị na bọtịnụ na-esote Text ozi nkwado ndabere na mpaghara. Ị nwere ike gbanyụọ ya ma ọ bụrụ na ị na-achọghị niile ozi na-akpaghị aka kwadoo ma ọ bụ ị pụrụ nanị atụgharị ikori azụ elu anya na windo ekwentị 8.
Ndabere gị foto na Videos ka ígwé ojii
I nwere ike ime otu ihe ahụ na foto na vidiyo. Dị nnọọ họrọ Photos + videos mgbe ahụ n'ihu na ihe ọ bụla ị chọrọ. Ị nwere ike ịhọrọ adịghị bulite iji gbanyụọ akpaka uploads. Họrọ Ezi àgwà na Best mma.
Iweghachi Your Data si Ígwé ojii
Iji weghachite kwadoo data, ị ga-mkpa-eso ndị na-esonụ:
Banye na akaụntụ Microsoft na ị na-eji ike na azụ elu.
Ị ga-kpaliri na otu nhọrọ iji weghachi ugbu a ekwentị na a azụ elu.
Họọrọ azụ elu na ị chọrọ iji weghachi ekwentị site mgbe ahụ weghachi ekwentị na-eche maka usoro.
The ngwa gaghị arụnyere na-akpaghị aka ma ị ga-mkpa iji wụnye ha site na listi. Tinye okwuntughe nke akaụntụ email na-elekọta mmadụ media ndekọ reconfigure ha na ị bụ ezi malite iji ekwentị gị!
Back Up Media Files na Wondershare Mobiletrans.
Wondershare Mobiletrans bụ a smart na otu-click ekwentị transfer na nkwado ndabere omume, nke na-ahapụ gị ndabere Photos, Videos, Music faịlụ na Windows ekwentị na PC na 1 Pịa. Ọ bụ a kpam kpam n'ihe ize ndụ-free na onye ọrụ-enyi na enyi ngwá ọrụ. Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute si download buttons n'okpuru.
Nkwado 3000+ igwe na-agba ọsọ Android, Windows, Nokia (Symbian) na iOS.
Nzọụkwụ 1: Run Mobiletrans on a Windows PC
Ka malitere, wụnye na-agba ọsọ ekwentị transfer omume - na Wondershare MobileTrans na Windows PC. Wee họrọ Back Up ekwentị gị si egosipụta nhọrọ.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ WinPhone na kọmputa.
Biko jikọọ Windows na ekwentị na kọmputa site na USB cables. Nọmalị Wondershare Mobiletrans ga-amata Windows Phone-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3: Malite azụ elu ekwentị.
Wondershare Mobiletrans pụrụ ịkwado ndabere Photos, Videos, na Music faịlụ na Windows na ekwentị PC. Họrọ ụdị faịlụ ị ga-achọ ndabere na pịa Malite Nyefee.
PS: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji hazie ọnọdụ nke gị ndabere nchekwa. Nanị pịa menu na nri n'elu nke mpio na mgbe ahụ họrọ "Mwube" ime nke a. Pịa na "ịchọgharị" iji họrọ faịlụ ọnọdụ gị oke wee pịa on "OK".
Olee otú iyi Music si PC ka iPad
25 ọhụrụ atụmatụ na Windows 10 na anyị can`t-echere iji hụ
Facebook ozi maka Windows
6 Ụzọ ịgbawa Windows XP Administrator Paswọdu
Olee otú Jiri Windows DVD Onye kere
Top 10 Best Free DVD Burners maka Windows
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4 ọsọ ọsọ na mfe na Windows 8
Windows 7 jiri (Blue / Black ihuenyo, Ifriizi, ịgbanyụ, wdg)
> Resource> Windows> Free Solutions ka na nkwado ma weghachite Windows Phone